वैशाख १ गते ए मेरो हजुर-४ केजीएफ च्याप्टर २ सँग भिड्ने ! - Laltin Media
Home»ग्ल्यामर»वैशाख १ गते ए मेरो हजुर-४ केजीएफ च्याप्टर २ सँग भिड्ने !
वैशाख १ गते ए मेरो हजुर-४ केजीएफ च्याप्टर २ सँग भिड्ने !
By लाल्टिन डट कम April 1, 2022 Updated: April 1, 2022 No Comments2 Mins Read
झरना थापाले निर्देशन गरेको पछिल्लो फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ वैशाख १ गते रिलिजको तयारीमा छ ।
फिल्म रिलिजको व्यवस्थापन गर्नमै अहिले झरना व्यस्त बनिरहेकी छन् । कोरोना महामारीपछि लयमा फर्किन फिल्म क्षेत्रले गरिरहेको संघर्ष र दक्षिण भारतीय (साउथ) फिल्मको बढ्दो प्रभावका बीच ‘ए मेरो हजुर ४’को चौथो सिक्वेल प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
विषयवस्तु र निर्देशकीय पक्षको कुरा गर्दै झरनाले भनिन्, “सबैले सहजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि ए मेरो हजुर प्रेमकथामा आधारित फिल्म हो । अहिलेको पुस्ताले प्रेमलाई बुझ्ने तरीकाबारे फिल्म बनाइएको हो । एकछिनमा लभ पर्ने र एकछिनमै छुट्ने, सानो कुरामा रिसाउने र सानो कुरामा चित्त दुखाउने टाइपको ।अहिलेको प्रेम दिगो देखिंदैन । अहिलेका बच्चामा संयमताको कमी हो कि ? यिनै कुरामा नै मैले फिल्मलाई केन्द्रित गरेकी छु । अहिलेको पुस्ताको प्रेममै आधारित भन्न मिल्छ । केही मात्रामा भएपनि आफ्नो मौलिकता र संस्कृतिलाई दर्शाउन मैले पाटनको नेवारी समुदायको संस्कार र संस्कृतिलाई चित्रण गरेकी छु । अहिलेका दर्शक धेरै बुझ्ने हुनाले कन्टेन्ट कस्तो छ भनेर उहाँहरुले पक्कै बुझ्नुभएको होला ।”
नयाँ वर्षमा केजीएफ-२ पनि आउन लागेको प्रसंगमा उनले भनिन्, “म नयाँ वर्षमै फिल्म लगाउँछु । डराउनेवाला छैन । भगवान् भरोसाअनुसार नै अघि बढ्नेछु । जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भनेर म अघि बढेको छु । २ र ३ मा जे भयो, ४ मा आएर पनि त्यही अवस्था आइरहेको छ ।”
उनले थपिन्, “अहिले पनि हामीले रिलिज मिति पहिल्यै तोकेका थियौं । म केजीएफ (साउथ फिल्म ‘केजीएफ च्याप्टर २’)माथि आएको होइन नि त । मैले डेट घोषणा गरेपछि केजीएफ आएको हो । मेरो सल्लाहकार पनि कमजोर भएको हो कि दर्शक पनि डराउनुभएको हो कि, मैले बुझ्नै सकेको छैन । सबैजनाले केजीएफसँग किन जुधाएको भनेर भन्नुहुन्छ । भाग्नुपर्छ भनेर सल्लाह पनि दिने र उहाँहरुले कमेन्ट पनि त्यस्तो गर्ने । वास्तवमा ए मेरो हजुरले पहिल्यै तोकिसकेको डेट हो ।”